Danny Welbeck oo ku dhibtoonaya inuu helo koox cusub oo uu u ciyaaro & Mushaarkiisa oo u sabab ah – Gool FM
(London) 28 Luulyo 2019. Ciyaaryahan Danny Welbeck ayaa la soo warinayaa inuu ku dhibtoonayo inuu helo koox cusub oo uu u ciyaaro, sababo la xiriira mushaarkiisa 100,000 kun oo gini isbuucii.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa ah mid lagu heli karo beeca xorta ah xagaagan kaddib markii laga sii daayey ama laga fasaxay kooxda Arsenal.
Kooxaha West Ham United, Everton iyo Newcastle United ayaa dhammaantood la la xiriirinayaa inay u dhaqaaqaan ciyaaryahankii hore ee Manchester United, kaasoo 42 gool dhaliyey 206 kulan oo uu saftay horyaalka Premier League.
Yeelkeede, sida uu warinayo Wargeyska The Sun, Welbeck ayaa dalbanaya mushahar dhan 100 kun oo gini isbuucii, marka lagu daro lacagta saxiixiisa 5 milyan oo gini, taasoo meesha ka saartay kooxo badan oo xiiseynaya adeegiisa.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Lazio ay soo bandhigtay xiisaha xiddiga ku dhashay Magaalada Manchester, laakiin kooxda reer Talyaani ayaa sidoo kale diyaar u ah inay ka baxdo dalabkiisa.
28-sano jirkaan ayaa seegay garoomada inta ugu badan xilli ciyaareedkii 2018-19 kaddib markii uu ka jabay canqoga kulan ay Gunners ka horjeeday kooxda Sporting Lisbon ee ka tirsanaa tartanka Europa League, kaasoo dhacay horraantii bishii November.
Liiska xiddigaha inta ugu badan kaarka cas loo taagay taariikhda kubadda cagta.. (Kaalintee kaga jiraa Ramos?)